Nei iMessage Yangu Isiri Kushanda Pane yangu iPhone? Iyo Kugadzirisa! - Iphone
iphone inoramba ichibvunza itunes password
how to dial a private number
maitiro ekuita ekuwedzera pane iphone
iphone yangu haibatanidzi kune itunes yangu
chii chakaoma reset iphone
Nei iMessage Yangu Isiri Kushanda Pane yangu iPhone uye iPad? Heino Kugadzirisa!
Bhuruu bhuruu, girini bhuruu. Kana wanga uchiedza kutumira iMessages uchishandisa yako iPhone uye ese mameseji ako ari kungoerekana achionekwa mutema matema, ipapo iMessage haisi kushanda nemazvo pane yako iPhone. Muchikamu chino, ini ndichatsanangura chii iMessage uye maitiro ekuongorora uye kugadzirisa matambudziko neMessage pane yako iPhone, iPad, uye iPod.
Chii chinonzi iMessage Uye Chinoshanda Sei?
iMessage yaive mhinduro yaApple kuBlackberry Messenger, uye iri rakasiyana zvachose pane yechinyakare mameseji (SMS) uye multimedia mameseji (MMS) nekuti iMessage inoshandisa data kutumira mameseji pachinzvimbo chechirongwa chekutumira mameseji kuburikidza neako mushambadzi webasa.
iMessage chinhu chakanakisa nekuti inobvumira iPhones, iPads, iPods, uye maMac kutumira mameseji anodarika echinyakare 160-hunhu muganho wemeseji nemiganhu yedata inosangana neMMS mameseji. Kukanganisa kwekutanga kweMessage ndeyekuti inoshanda chete pakati pemidziyo yeApple. Hazvigoneke kutumira iMessage kune mumwe munhu ane Android smartphone.
Ndeapi maGreen Bubbles uye Ebhuruu matema Pane iPhones?
Paunovhura iyo Meseji app, uchaona kuti kana iwe uchitumira mameseji, dzimwe nguva anotumirwa mubhuruu bhuruu uye dzimwe nguva anotumirwa mune girobhu girini. Hezvino zvinoreva izvo:
Kana meseji yako ikaonekwa mune yebhuruu bubble, saka yako meseji meseji yakatumirwa uchishandisa iMessage.
Kana yako meseji ikaonekwa mune yakasvibira bubble, saka yako meseji meseji yakatumirwa uchishandisa yako maseru kuronga, kungave kushandisa SMS kana MMS.
Ziva Dambudziko Rako neMessage
Kana uri kusangana nyaya pamwe iMessage, danho rokutanga iri kuona kuti dambudziko iri rimwe kuonana kana iMessage haasi kushanda pamwe chero vokukurukura musi iPhone wako. Kana iMessage isiri kushanda nemumwe chete weavo vaunofambidzana navo, dambudziko rinogona kunge riri zvavo magumo. Kana iMessage isiri kushanda nechero ipi yehama dzako, dambudziko rinogona kunge riri yako magumo.
Tumira A Test Meseji
Tsvaga mumwe munhu waunoziva ane iPhone inogona kubudirira kutumira uye kugamuchira iMessages. (Iwe haufanire kunge wakaomarara zvakanyanya.) Vhura mameseji uye uvatumire meseji. Kana iyo bubble iri yebhuruu, saka iMessage iri kushanda. Kana iyo bubble iri yegirini, saka iMessage haisi kushanda uye yako iPhone iri kutumira mameseji uchishandisa yako cellular chirongwa.
iMessage Kunze Kwe odha?
Kana iMessage iri kushanda pane yako iPhone, asi iyo mameseji aunogamuchira ari mune zvisiri izvo , tarisa chinyorwa chedu chekuti ungagadzirisa sei dambudziko.
Maitiro Ekugadzirisa iMessage Pane Yako iPhone kana iPad
1.Dzorera iMessage Off, Reboot, Uye Wobva Wadzokera Pairi
Musoro kune Zvirongwa -> Meseji uye tora bhatani padhuze neMessage kudzima iMessage pane yako iPhone kana iPad. Tevere, bata bhatani remagetsi pasi kusvikira iwe waona 'Slide kune Power Off' uye tsvedza chigunwe chako kuyambuka bhawa kudzima yako iPhone kana iPad. Dzorera chigadzirwa chako zvakare, dzokera ku Zvirongwa -> Meseji , uye dzosera iMessage kumashure. Kugadzirisa kuri nyore kunoshanda yakawanda yenguva.
2. Ita Kuti Chokwadi iMessage Is Set Up Zvakarurama
Musoro kune Zvirongwa -> Meseji uye tapira kuti uvhure menyu chinhu chinonzi 'Tumira & Gamuchira'. Pano, iwe uchaona runyorwa rwefoni nhamba uye email kero izvo zvakagadzirirwa kutumira uye kugamuchira iMessages pane chako chishandiso. Tarisa pasi pechikamu chakanzi 'Start New Conversations From', uye kana pasina cheki padyo nenhamba yako yefoni, tinya panhamba yako yefoni kuti umise iMessage yenhamba yako.
3. Tarisa Yako Internet Kubatana
Rangarira kuti iMessage inoshanda chete neWi-Fi kana nharembozha yedhata, saka ngativei nechokwadi chekuti iPhone yako kana iPad yakabatana neinternet. Vhura Safari pafoni yako uye edza kufamba kune chero webhusaiti. Kana iyo webhusaiti isingatakure kana Safari ikati hauna kubatana neinternet, iMessages yako haizotumire kana
Zano: Kana iyo internet isiri kushanda pane yako iPhone, unogona kunge wakabatanidzwa kune yeWi-Fi network isina yakanaka yekubatanidza internet. Edza kudzima Wi-Fi uye kutumira zvakare iMessage yako. Kana izvozvo zvichishanda, dambudziko raive neWi-Fi, kwete neMessage.
4. Saina Kunze kweMessage uye Sign Sign In
Dzokera kumashure Zvirongwa -> Meseji uye tapira kuti uvhure 'Tumira & Gamuchira'. Tevere, tinya panoti 'Apple ID: (yako Apple ID)' uye sarudza 'Sign Out'. Saina zvakare mukati uchishandisa yako Apple ID uye edza kutumira iMessage kune imwe yeshamwari dzako ne iPhone.
5. Ongorora Kuti An iOS Update
Musoro kune Zvirongwa -> General -> Software Kwidziridza uye tarisa kuti uone kana paine iOS yekuvandudza ye iPhone yako. Munguva yangu kuApple, zvimwe zvezvinhu zvakajairika zvandakatarisana nazvo zvaive nematambudziko neMessage, uye Apple inowanzo pusha zvinyorwa kuti igadzirise nyaya dzeMessage nevatakuri vakasiyana siyana.
6. Dzorerazve Network Zvirongwa
Nyaya dzine network yekubatana dzinogona zvakare kukonzera matambudziko neMessage, uye kazhinji nguva kudzoreredza yako iPhone's network marongero kumashure kune fekitori zvisirizvo zvinogona kugadzirisa nyaya ne iMessage. Kuti udzorezve yako iPhone kana iPad's network marongero, enda ku Zvirongwa -> General -> Seta zvakare uye sarudza 'Dzorerazve Network Zvirongwa'.
Izwi renyevero: Usati waita izvi, ita shuwa kuti iwe unoziva yako Wi-Fi mapassword, nekuti 'Dzorerazve Network Zvirongwa' ichabvisa ese akachengetedzwa eWi-Fi network pane yako iPhone. Mushure mokunge yako iPhone yatanga patsva, iwe uchafanirwa kuisa zvakare yako Wi-Fi mapassword kumba uye kubasa. Yako iPhone yeBluetooth uye Zvirongwa zveVPN ichagadziriswazve kune zvakasarudzika zvefekitori.
7. Bata Apple Tsigiro
Kunyangwe pandakanga ndiri kuApple, pakanga paine zviitiko zvisingawanzoitika apo matanho ese ekumusoro ekutambudza aisazogadzirisa dambudziko neMessage, uye isu taifanira kukwidza nyaya kune mainjiniya eApple avo vaizogadzirisa nyaya iyi.
foni inoramba ichienda kuvoicemail
Kana iwe ukasarudza kushanyira Apple Store, zviitire iwe nyasha uye fonera kumberi ita musangano neGenius Bar saka haufanire kumirira kutenderera kuti uwane rubatsiro.
Kana iwe uchitenda kuti pane nyaya neiyo yako Wi-Fi kanyanga, tinokurudzirawo kambani inogadzirisa inonzi Pulse . Ivo vanozotumira tekinoroji kwauri iwe mune mashoma semaminetsi makumi matanhatu!
Ndinovimba chinyorwa ichi chakubatsira iwe kugadzirisa nyaya iwe yawave uine iMessage. Ndiri kutarisira kunzwa kubva kwauri nezve zvako zvakaitika neMessage muchikamu chemashoko pazasi.